DOWNLOAD Bae Systems egbe T.1X FS2004 - Rikoooo
downloads 10 678
Bae Systems egbe T.1X na multiple textures na multiple nsụgharị. Agha ugbo elu modeled nke ọma. Reflections na-sụgharịrị. 3d clickable kokpiiti.
The Bae Systems egbe bụ a British otu-engine, elu ugboelu ọzụzụ ugbo elu. Ọ mbụ ama na 1974 dị ka Hawker Siddeley egbe, na ekemende mepụtara ya nọchiri ụlọ ọrụ, British Aerospace na Bae Systems, karị. Ọ na-e-eji na a ọzụzụ ikike na dị ka a ala-eri ọgụ ugbo elu.
Rụọ nke egbe-agụnye Royal Air Force, Ichi Uhie akụ efe n'elu na ngosi otu; nakwa ọnụ ọgụgụ mba ọzọ agha rụọ. The egbe ka na mmepụta na n'elu 900 hawks-ere ka 18 ahịa gburugburu ụwa. (Wikipedia)
Onye edemede: Model de David Brice & David Friswell